I-Bayou Teche Cottage - I-Airbnb
I-Bayou Teche Cottage
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Jena
U-Jena Ungumbungazi ovelele
I-Cajun Cottage esanda kulungiswa etholakala e-Bayou Teche eDowntown New Iberia's Historic Main St. Indawo ixhunywe nezihlahla ze-Oak ne-Cypress ezindala ezinombono omuhle we-bayou. Ukuhamba ibanga ukusuka ezindaweni zokudlela, amabha, nezitolo. Amamayela angu-8 ukusuka e-Avery Island. Ibhulakufesi elilula nekhofi kanye nejusi kuhlinzekiwe. I-cottage iyindawo yangasese enekhishi, indawo yokuhlala, igumbi lokulala elihlukile, futhi elihlolwe kuvulandi. Isilungiselelo esiyimfihlo kakhulu nesinokuthula.
Ikotishi liyindawo yangasese enekamelo lokulala eli-1, i-1 yokugezela, indawo yokuhlala/yokudlela kanye nekhishi (ifriji encane/ifriji, i-microwave, usinki, i-toaster, umenzi wekhofi, i-griddle, i-oven yokuhambisa) Indawo yokuhlala inosofa ogoqeka waba yiwele elilodwa. Ihlolwe kuvulandi enetafula lokudlela langaphandle. I-BBQ iyatholakala uma uyicela. Umpheme ongaphambili onendiza ebheke e-bayou.
4.87 · 268 okushiwo abanye
Itholakala esifundeni esinomlando esisedolobheni laseNew Iberia kodwa ithule futhi ithunjiwe. Iningi lezakhamizi alazi ukuthi lo mgwaqo ukhona.
Sitholakala ngocingo noma nini ngesikhathi sokuhlala. Ngokuvamile angisiboni isivakashi sami njengoba ikotishi linendawo yalo, kodwa ngihlale ngitholakala!
UJena Ungumbungazi ovelele